Natolotry ny Bianco ny Pac ny raharaha: naiditra am-ponja ny dimy tamin’ireo nivarotra ny tanin’ny CUA | NewsMada
Natolotry ny Bianco ny Pac ny raharaha: naiditra am-ponja ny dimy tamin’ireo nivarotra ny tanin’ny CUA
Par Taratra sur 04/09/2019
Resaka tanin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) indray ny manaraka. Niakatra tetsy amin’ny fampanoavana eo anivon’ny Tendrom-pitsarana (Pac) 67 ha, omaly ny fivarotana tany tsy ara-dalàna. Dimy ireo naiditra am-ponja vonjimaika ka anisan’izany ireo mpitantana teo aloha sy ny avy amin’ny minisiteran’ny Serasera amin’izao fotoana izao…
Fito ireo niakatra fampanoavana ahina ho voarohirohy sy tafiditra amin’izao raharaha izao. Dimy kosa ireo nalefa eny Antanimora avy hatrany, taorian’ny famotorana. Anisan’ireo naiditra am-ponja vonjimaika tamin’izany ny mpiasan’ny sampan-draharahan’ny fananan-tany iray “conservateur” teo aloha, anisan’ny ahiahina ho nanao ny famindrana ny tany. Ny mpampaka-teny teo aloha eo anivon’ny CUA sy ny tale misahana ny raharaham-pitsarana ao amin’ny kaominina koa ary ny filohan’ny mpanolotsain’ny Tanàna, efa lasa talen’ny fitantanam-bola eo anivon’ny minisiteran’ny Serasera sy ny fifandraisana, amin’izao fotoana izao. Manampy azy ireo ny sekretera mpanatanteraky ny filankevitry ny Tanàna.
Tafaporitsaka any ivelany ny mpandraharaha iray
Tafaporitsaka ary efa any ivelany kosa ny mpandraharaha, teratany karana iray ahina ho voarohirohy amin’izao raharaha izao koa.
Efa nidoboka am-ponja vonjimaika ihany koa anefa ny sasany amin’izy ireo amin’ny andraikitra nosahaniny teo anivon’ny CUA noho ny resaka fivarotana ny zaridaina Antaninarenina ary izao mbola tafiditra amin’ity raharaha ity izao indray koa.
Niditra an-tsehatra ny Bianco
Tonga teny amin’ny Bianco, ny volana avrily teo ny fitoriana momba ny resaka fivarotana tsy ara-dalàna ny tanin’ny kaominina eny Antsonjombe, mirefy 9 ha mahery. Efa niteraka resabe hatramin’ny ela rahateo izany. Niditra an-tsehatra amin’ny fanadihadiana rehetra ny sampana Bianco eto
Antananarivo. Taorian’izany, niroso amin’ny fampiakarana ny raharaha tetsy amin’ny Pac 67 ha ny eo anivon’ity rafitra miady amin’ny kolikoly ity ary izao nampidirana am-ponja tompon’andraikitra ambony maromaro izao.
Nanao ny fanadihadiana koa ny MAHTP
Tsiahivina fa nanomboka niseho masoandro, ny volana marsa teo ary niakatra fitsarana ny raharaha momba ireo tanim-panjakana na tanin’ny CUA. Anisan’ny nitady ny marina sy nanao ny fanadihadiana rehetra rahateo ny teo anivon’ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany (MAHTP). Tsy ny eto an-dRenivohitra ihany fa ny tanim-panjakana sy an’ny kaominina manerana Nosy, tafiditra ao anatin’ny fanadihadiana ataon’ny minisitra avokoa.
Manafaingana ny raharaha ny Pac…
Tafiditra ao anatin’izany ny “Zaridaina Antaninarenina” sy ny “CEG Analamahitsy”. Misy tafiditra amin’ireo raharaha roa ireo ny sasany amin’ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny CUA tamin’ny fotoan’androny. Araka izany, andrasana ny tohin’itony raharaha itony. Nampanantena rahateo ny Pac fa hiezaka ny hampiakatra sy hanafaingana ny antontan-taratasy eo aminy.